Fitantanam-pitondrana · Jolay, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Jolay, 2014
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Jolay, 2014
Filipina: Filohan'ny ‘Ady Amin'ny Kolikoly’ Miatrika Antso Fitsipaham-Pitokisana Noho Ny Fiahiahiana Azy Ho Manao Kolikoly
Azia Atsinanana 27 Jolay 2014
Taorian'ny nilazàny Fitsarana Antampony ny maha-tsy araka ny Lalàm-panorenana ny famatsiambola ny fandaharanasa iray tantaniny, ampangaina ho manao kolikoly ny filohan'i Filipina Benigno Aquino III, izay nandresy taminà fiaraha-mientana manohitra ny kolikoly.
Mbola Bahanan'i Tajikistan Hatrany ilay Tambajotra Sosialy Rosiana Malaza
Tajikistan 27 Jolay 2014
Mandray ny andraikitra feno sy tanteraka amin'ny maha-mpiaro ny ara-moralin'ny daholobe azy governemanta ao Tajikistan - ary mpiaro manoloana ireo fanaratsiana ny governemanta. Nanampy isa ny Youtube ao anatin'ny lisitr'ireo tranonkala voabahanan ny tambajotra Rosiana Odnoklassniki, tamin'ny 18 Jolay.
Manome 4 Tapitrisa Robla Ho An'izay Mahavaha Ny Tor i Rosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana 25 Jolay 2014
Na dia toa tsy dia hotanteraka loatra aza, raha tafita io tetikasa famahàna kasain'i Rosia hatao io, dia ho tandindonin-doza ireo olona an-tapitrisa mpisera amin'ny aterineto izay tsy ratsy velively ny safidiny hiditra amin'ny tsy fitononana anarana ety anaty aterineto.
Jokowi No Filoha Fahatelon'i Indonezia Voafidy Tamin'ny Fomba Mivantana
Azia Atsinanana 24 Jolay 2014
Ny Governoran'i Jakarta Joko Widodo (Jokowi), politisiana malaza avy any an-tanànan'i Solo, no nahazo ny ampaham-bato 53,15 isanjato tamin'ny vato manankery manakaiky ny 130 tapitrisa.
Hena Lany Andro Aroson'ny McDonald, KFC Sy Ireo Sakafo Tselatra Ao Shina
Azia Atsinanana 23 Jolay 2014
Ity no tantara ratsy farany indrindra namely an'i Shina, izay nolalovanà andian'olana tato anatin'ny taona vitsy, isan'izany ny resaka ronono nisy poizina tamin'ny 2008 izay nahafaty zaza menavava enina.
Eto Ny “Sokajim-Pampitandremana” Hilaza Aminao Ny Famoretan'ny Polisin'i Hong Kong Amin'ireo Mpanohana Ny Demaokrasia
Azia Atsinanana 21 Jolay 2014
Nanangana ny "Sokajim-Pampitandremana" HongKongey, fampisehoana fihetsiketsehana izay mitsikera ny famoretana mahery vaika ataon'ny polisy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana milamina ilay mpanakanto ao an-toerana, Kasey Wong.
Antontan-taratasy Tafaporitsaka Mamafy Aloka Momba Ny Hoavin'ny Fitrandrahana Entona Fandrehitra Ao Tanzania
Afrika Mainty 21 Jolay 2014
Tafaporitsaka ho hitan'ny besinimaro, fifanarahana iray fifampizaràna famokarana entona governemanta Tanzaniana sy ny "Statoil" orinasa maro rantsana avy any Norvezy, no manasongadina ny hoe lasa resaka manohintohina ny resaka fidiram-bola avy amin'ny toeram-pitrandrahana entona ao Tanzania—sy ny hoe iza no mahazo tombontsoa amin'izy ireny.